Posted by editor on July 12, 2011 Comments
Golaha wasiirada dalka Masar oo la filayo in isku shaandhayn lagu sameeyo toddobaadkan
Cairo:-Ra’iisal wasaaraha Masar Cisaam Sharaf ayaa shaaca ka qaaday in uu go’aansaday in uu isku shaandhayn ku sameeyo golaha wasiirada toddobaadkan, islamarkaana uu soo magacaabo guddoomiyaasha gobolada ka hor dhamaadka bishan.
Sharaf ayaa tilmaamay in uu u xilsaaray wasiirka arrimaha gudaha in uu dedejiyo in saraakiisha lagu tuhunsan yahay in kulugu lahaayeen dilka dibadbaxayaasha inta lagu guda jirey kacdoonkii 25 janaayo.
laga eryo shaqada.
Sidoo kale ra’iisal wasaaraha ayaa ku nuuxnuuxsaday in u xilsaaray wasiirka arrimaha gudaha in uu amaanka iyo kala dambeynta dib u soo celiyo, hadii kale uu xilka laga qaadi doono hadii uusan fulin dalabaadka shacabka iyo ujeedooyinka kacaanka.
Cisaam Sharaf ayaa ugu baaqay golaha sare in ay taabageliyaan xeerka lagu maxkamadeenayo dhamaan mas’uuliyiintii nidaamkii hore iyo kuwii kulugu lahaa dilka dibadbaxyaashii ka soo horjeeday maamulkii hore ee uu madaxa ka ahaa Xusni Mubaarak.
Ra’iisal wasaare Sharaf ayaa carabaabay in uu go’aansaday in uu mas’uul ka noqdo golaha maamulka sunduuqa daryeelka dhibanayaashii kacaankii 25 janaayo iyo qoyskooda si uu wax ugu qabto qoysaska shuhadada iyo kuwa ku dhaawacmay , islamarkaana uu sameyn doono qaab dhismeed dhanka warbaahinta ah.
Canada oo ku gacan seertay ka qeyb galka shir looga hadlayo haysashada hubka Nuclear-ka
Toronto:-Wasiirka arrimaha dibadda Canada ninka lagu magcaabo John Brad ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa uu ka baxay shirka QM ee ku aadan sidii hubka nuclear-ka looga tiritiri lahaa caalamka kadib markii ay cabsaho ka muujisay la wareegidda Korea-da woqooyi madaxtinimada shirka.
Shir jaraa’id uu ku qabtay wasiirku Ottawa ayuu ku sheegay in wax laga xumaado ay tahay in krea-da woqooyi ay la wareegto madaxtinimada shir ku aadan cirbtirka hubka Nuclear-ka oo ay xubno ka yihiin 65 dowladood.
Canada ayaa ku eedeysay Korea-da woqooyi in ay tahay dalka ugu weyn ee faafiya hubka nuclear-ka islamarkaana ay baalmartay mabaad’da guddiga qaabilsan la dagaalanka tirtiridda hubka nuclear-ka dunida.
Canada ayaa la filayaa in 9 bisha soo socoto ay qabato madaxtinimada shirka QM ee hub dhigista kaasi oo la’ aasaasay 32 sano ka hor, waana xilliga uu ku eg yahay waqtiga ay korea-da wqooyi hayn doonto madaxtinimada shirka.
Dhanka kale xukuumadda mareykanka ayaa sheegtay in aysan qorsheenayn in ay ka baxdo shirka maadaama ay Korea-da woqooyi la wareegi doonto madaxtinimada shirka.
Guddi hoostaga QM ayaa ku eedeeyey Korea-da woqooyi in bishii May ee la soo dhaafay ay dhoofisay technolg-da Nuclear-ka iyo gantaalo taasi oo xadgudub ku ah cunaqabataynta lagu soo rogay korea-da woqooyi.